Ogaden News Agency (ONA) – Hoggaamiyaha Kacdoonka Hubeysan ee Ginbot7 oo ku biiray Ciidanka Ginbot7
Hoggaamiyaha Kacdoonka Hubeysan ee Ginbot7 oo ku biiray Ciidanka Ginbot7
Posted by ONA Admin	/ July 22, 2015
Professor Berhanu Nega Hoggaamiyaha Kacdoonka Hubeysan ee Ginbot ayaa maalintii Sabtida ka tagay shaqadii uu ka hayay Jaamacada Bucknell University isaga oo ka doorbiday innuu hubka qaado hoggaamiyana Ciidanka Ginbot 7.
Professarka ayaa u dhoofay dalka Eritrea islamarkaasna waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay ciidanka Ginbot 7 oo tababaro uga socdaan dalka Eritrea sida lagu arkay muuqaalo ay soo saareen TV-ga ESAT.
Isbadalka uu sameeyay Professorka ayaa dad-badan aad uga yaabiyay iyada oo lafilaynin nin shaqo wanaagsan heysta oo Jaamacad Bare ka ah innuu shaqadiisii iyo noloshiisii wacnedy inta uu ka tago doonta nolol adag oo jabhadeyna
Kacdoonka Ciidan ee Jabhada Ginbot 7 ayaa khal-khal badan galiyay Taliska guumeysiga Ethiopia, kuwaasoo dhawaan ka hadlay Baarlamaanka Ethiopia oo sheegay in Wadanka Eritrea ku howlanyahay sidii ay u burburin lahaayeen Taliska Ethiopia.
Raisal Wasaaraha Ethiopia ayaa Guriga Baarlamaankiisa ka sheegay in tallaabo ku habboon laga qaadi doono cid kasta oo Xasilli dari karida dalka Ethiopia. Waxaana arrintaas loo qaatay in Ethiopia isu diyaarinayso daggaal Colaadeed oo ka dhex qarxa mar labaad labada dal ee Eritrea iyo Ethiopia.
Sanadkii 2000 ayaa Daggaal aad u qadhaadh oo Boqolaal kun ku dhinteen ka qarxay Xuduudka Ethiopia iyo Eritrea halkaas oo Qaramada midobay kusoo saartey qaraar xabad joojineed oo labada wadan la dhex dhigay iyo qodobo lagu go’aamiyay in dhulkamida Xuduudka Ethio-Eritrea in lasiiyo Wadanka Eritrea midkaas oo Ethiopia qaadacday. Labada wadan ayaa mudadaas intii ka danbeysay Daggaal dhex marin laakiin colaad adag dhextaalay.
Ethiopia ayaa u aragtay Ciidamada Cusub ee Ginbot7 ee lagu tababarayo Eritrea inay khatar weyn ku tahay jiritaanka taliska Woyanaha Ethiopia. Waqtigan oo kacdoon shacab ka socda Dalka Ethiopia oo idil.
Gumeysiga Ethiopia ayaa cabsidan soo wajahday kadib markii Ciidamo Tigree ah iyo kuwa Ginbo7 ay weraro kusoo qaadeen Waqooyiga Ethiopia. Halkaasi oo ah dhulka Axmaarada iyo Tigreega.
Daggaalkan Hubeysan ee Axmaaradu soo qaaday waxa uu abuuray in Axmaaro badan oo ciil u qabta taliska woyanaha inay ku biiraan Jabhada Tigreega midkaas oo cimriga gaabtay ee Taliska Woyanaha soo dadajisay dhicitaankiisa.
Dadka Siyaasada Ethiopia lasocda ayaa sheegay Hadii Ethiopia weerar ku qaado Eritrea inay ku jabayso waayo ayay dhaheen Xaalada Ethiopia ku jirto waqtigan waa ka duwantahay sanadkii 2000. Doorashada TPLF ku shubatay 100% waxay abuurtay shacabka Ethiopiana u xaqiijisay in taliska TPLF qori caaradiis mooyaane rajo kale laheyn.
Professarka ku biiray ciidanka ayaa sii xoojin doonta shacabka Axmaarada gaar ahaan dhalinyarada inay hubka qaadaan kuna biiraan Jabhada Hubeysan ee Ginbo7